Olee otú Naghachi Ozi si Samsung echiche
Samsung echiche: Olee naghachi Ozi
> Resource> Samsung> Samsung echiche: Olee naghachi Ozi
Olee otú m nwere naghachi ozi na a Samsung echiche SGH-A877?
M ehichapụ ụfọdụ importane ozi ederede na m Samsung echiche SGH-A877. Ugbu a, m mkpa ha azụ. M na-achọgharị a otutu, na fọrọ nke nta niile ha nwere ike na-naghachi media ọdịnaya dị ka foto, video. Ya mere, ihe m na-eche bụ na: ọ ga-agbake ozi ederede na na-ehichapụ?
Ozi ederede-echekwara na esịtidem ebe nchekwa n'ime ekwentị gị, nke bụ dị iche iche si media ọdịnaya. Naghachi ha, ị mkpa ịchọta a ngwá ọrụ na-eme ka i nwee naghachi ehichapụ data si esịtidem ebe nchekwa na ngwaọrụ gị, dị ka Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery). Nke a na usoro bụ ụwa mbụ Android data mgbake ngwá ọrụ ekwe ka ị na-agbake ozi na kọntaktị site na gam akporo igwe gị, gụnyere Samsung echiche. Naanị ihe bụ mkpa ka ị kwụsịrị ngwaọrụ gị tupu ị malite mgbake.
Download free ikpe version nke software n'okpuru nwere a na-agbalị ugbu a:
Cheta na: Nke a software akwado nza nke gam akporo igwe, ị nwere ike ịlele ndepụta ebe a.
Wụnye na-agba ọsọ ahụ omume na kọmputa gị. Ọ ga-ele anya dị ka nke a:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Samsung echiche gị PC
Get ngwaọrụ gị jikọọ na kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-ahụ window n'okpuru, i kwesịrị inwe ike USB debugging na ngwaọrụ gị. Soro ụzọ n'okpuru ime ya:
Nzọụkwụ 2. Malite ike iṅomi gị Samsung echiche
Lelee batrị na ngwaọrụ gị tupu ị malite iṅomi ngwaọrụ gị, n'ịhụ na batrị bụ karịa 20%. Mgbe ahụ, pịa Malite iji nyochaa na data na ngwaọrụ gị tupu gị ịgụ isiokwu ya.
Mgbe ị na-ahụ window n'okpuru, ị mkpa ịkwaga ngwaọrụ gị na pịa Kwe Ka igosi na ya, ruo mgbe ọ na-arahụ. Mgbe ahụ azụ gị na kọmputa na pịa Malite na window n'okpuru ike iṅomi ngwaọrụ gị maka data na ya.
Nzọụkwụ 3. Preview & naghachi ozi ederede na gị Samsung echiche
Mgbe ihe omume ahụ na-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị, ị pụrụ ịmalite ịhụchalụ hụrụ data n'otu oge. Na n'aka ekpe nke window, ị nwere ike pịa Izi ozi ka ịhụchalụ nkọwa nke ozi niile. Họrọ ọ bụla n'ime ha na ị chọrọ na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị site otu Pịa.
Rịba ama: The ozi ị hụrụ ebe a nwere ehichapụ ndị na ẹdude ndị na ngwaọrụ gị. Ma nke ha nwere onwe ha na agba. Ị nwere ike ikewapụ ha site na iji button n'elu: Naanị egosipụta ehichapụ ihe.
Download free ikpe version nke software n'okpuru nwere a na-agbalị: